लिम्वूवान - विविध सामग्री: साउदी अरबको सामान्य चिनारी
साउदी अरब एक खाडी मुलुक हो, साउदी अरबको भौगोलिक बनावट पृथ्वीको भूमध्यरेखाबाट पूर्व पश्चिम दिशामा १५ डिग्री उत्तरी अक्षांश देखि ३० डिग्री उत्तरी अक्षांश भन्दामाथि २२,५०,००० वर्ग कि.मी. फैलिएर रहेको भू-भाग छ । यस देश समथर मैदानी भाग साथै पहाडले बनेको छ । यस देशको प्राय सम्पूर्ण भाग रातो बलुवा र पत्रे बलाउटे ढुंङ्गायुक्त मरुभूमिले बनेको छ । यो देशको पूर्व भाग अरब सागरसंग जोडिएको छ भने पश्चिम दक्षिण भाग लाल सागरसंग जोडिएको छ । बाँकी भाग पूर्व दक्षिणमा येमन, ओमन देशसंग जोडिएको छ । पूर्वतर्फ बहराइन, कतार, यु.ए.र्इ. जोडिएको छ , पश्चिम उत्तर भाग जोर्डन, इरान, र कुवेतसंग जोडिएको छ । यस देशको कुल जनसंख्या र्इ.स. २००४ को जनगणना अनुसार २२.८ मिलियन २,४३,००,००० नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन् । यस देश मरुभूमिबाट बनेको हुनाले मौसम दुर्इ किसिमको मात्र हुन्छ । जाडो र गर्मी मौसम मात्र छ । गर्मीमा साधारण तथा ३० डिग्री सेलसियस देखि ४८ डिग्री सेलसियस माथि तापक्रम हुन्छ भने जाडोमा समुद्र नजिक भएको इलाकाहरुमा समुद्रको पानी तातिन नपाउने हुनाले ० डिग्री सेलसियस सम्म तापत्रम र्झन जान्छ । यो देश ठूलो भएको कारणले कुनै ठाउंमा धेरै गर्मी र कुनै ठाउंमा धेरै जाडो हुने ठाउँहरु पनि छन् । गर्मी धेरै हुने ठाउँहरु दम्माम, खोबर, जुवेल, रियाद आदि ठाउँहरु पर्दछन् । जाडो हुने ठाउँहरुमा आरआर, तबुक, नजरान, तायफ आदी ठाउँहरु पर्दछन् । जाडोको मौसममा यस ठाउँहरुमा वरफ समेत जम्ने गर्छ । यस देशमा खोला पाईन्दैन । यो देश बालुवाले भरिएको मरुभूमिबाट बनेको हुननाले मरुभूमिमा पाइने स-साना बुट्टीयान बोट, विरुवा बाहेक अरु बोट बिरुवाहरु पाइन्दैन । यस देशमा पाइने प्रमुख बिरुवा भनेको तमोर ( खजुरको बोट ) आदा-आदा ( खर्बुजाको ) लहरा साथै मानिसले लगाएका स-साना खाल्का बिरुवाहरु ठाउँ ठाउँमा पाइन्छ । यस देशमा बर्षात भनेकनेको बर्षा २,३ पटक मात्र हुन्छ । त्यो पनि ठूलो बर्ष भने कम मात्रामा हुने गर्छ । याहा लगाइएको बोटबिरुवाहरुमा दिनमा दुर्इ पटक अनिवार्य रुपमा पानी दिनु पर्छ । यस देशमा सुख्खा हावा बहने भएको हुनाले यस्तो स्थिति भएको हो ।
यस देशको समाज अन्य देशको तुलननामा बन्द किसिमको छ भन्दा फरक पर्दैन किनभने यस साउदी अरबमा कुनै पनि मानिस एक अर्काको घरमा खुल्ला रुपले आवत जावत गर्न सकिन्दैन आफ्नो मान्छे नै किन नहोस् । यसरी खुला रुपमा आवत जावत गर्नलाई मुस्लिम समाजमा राम्रो मानिन्दैन भन्ने मान्यता भएकोले राम्रो मानिन्दैन । मुस्लीम धर्ममा छोरी मानिसको हकमा पर पुरुषले हेर्न र छोरी मानिसले पर पुरुषलाई हेर्न निषेध छ । यस देशमा पनि दुर्इ वर्णका मानिसहरु कालान्तरबाट बसोबास गर्दै आएको पाईन्छ । ति हुन काला र गोरा जाति । काला जाति भन्दा गोरा जाति सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, र प्रतिष्ठाको हिसावमा सम्पन्न छन् । यस देशमा गाउँले र शहरीया समाज छन् । गाउँका मानिस भन्दा शहरका मानिसहरु शिक्षित छन् । यहाको गाउँमा बसोवास गर्ने मानिसहरुलाई बंधु भन्ने गर्दछन् । यहाको समाजमा ठूलो जात र सानो जात भनेर भेतभाव छैन । सबैलाई समान अधिकार, ब्यावहार गर्दछन् । यहा कुनै पनि मानिससंग भेटघाट हुदा चाहे आफु भन्दा ठूलो होस् या सानो एकै हिसाबमा सम्मान गर्दा नमस्कार ( सलावालीकुम ) भनेर मान गर्ने गरिन्छ । यहा भगवानको नाममा दिनको पाँच पटक पुजा ( नमास ) पढ्ने गरिन्छ । सिरिप भगवानको नाम लिएर केहि सिमित तन्त्रको आधारमा पुजा ( नमास ) गर्ने गरिन्छ । इस्लामिक धर्म भित्र पनि धेरै फिर्काहरु भएता पनि खास गरेर सिआ र सुन्नी गरि दुर्इ फिर्काको अग्रस्थान रहेको छ र यी दुर्इ फिकाको विषेश तरिकाबाट नै नमास ( पुजा ) गर्ने गर्दछन् ।
यस देशको राजधानी रियाद हो । यो देशमा राजा भएको हुनाले र सरकार प्रमुख पनि राजा नै भएको हुनाले देशको सम्पूर्ण प्रशासनका अंगहरुमा राजाको निर्देशन अनुसार परिचालन भएका छन् । यस देशको शासन प्रणाली मुस्लिम धर्म दर्शनको आधारमा नीयम, कानून, नीति मान्यता विचार संचालन भएको र यहाँका सम्पूर्ण नागरिक मुस्लिम धर्मावलम्बी भएको हुनाले यहाको राज्य शासन प्रणाली र सामाजिक मुल्य र मान्यताहरुमा एक अर्कामा बाझएिका छैन । त्यस कारण आजसम्म कुनै किसिमको राजनीतिक विचारधाराहरु कुनै पनि समूह र ब्याक्ति अगाडी आएका छैनन् । यहाँ कुनै पनि पाटी संघ सस्थाहरु शुन्यमा छन् । मृत्यूको सजाय दिने राष्ट्रहरु मध्यमा यस साउदी अरब पनि एक राष्ट्र पर्न जान्छ । यस साउदी अरबमा कुनै पनि व्याक्ति वा वरिष्ठ व्याक्तिको देहवासनको नाममा सोक मान्ने या सार्वजनिक बिदा छैन । सबै किसिमका नशालु पदार्थमाहरुमा सक्त रुपले मनाहि बन्देज लगाईएको छ । आज आएर परिवर्तका हिसाबमा २१ औं शताब्दीको अन्त्य तिर आएर साउदी अरबको राष्ट्र दिवस साउदी महिना साउन ३०/१४२६ ( र्इ.स. २००५ ) देखी मनाउदै आएको छ तर यहाँका हजारौ लाखौ कम्पनिहरुमा कम्पनिको मालिकको बिचारको आधारमा छुट्टी दिने नदिने तय गरिन्छ । कुनै कम्पनिले छुट्टी दिन्छ त कुनै कम्पनिले दिदैन । यो भन्दा अगाडि कुनै पनि दिवस वा राजा एवं वरिष्ठ व्याक्तिको देहवासन भए पनि सोक मनाउने छुट्टी हुने चलन थिएन र आज सम्म पनि भएको छैन, यहाँ हप्ताको एक दिन शुक्रबार भने सार्वजनिक रुपमा छुट्टी दिने चलन छ । जसमा पनि कतिपया कम्पनिहरुमा हुदैन । साउदीको इतिहासमा साउदी नागरिकले आफ्नो बालिक मताधिकारबाट मन दिएर चुनावबाट चुनिएको आज भन्दा ४ बर्ष पहिला वोलेदिया ( नगर पालिका ) को प्रमुखको मात्र अधिकार पाएका थिए । यसरी आफुले चाहेको व्याक्तिको आफ्नो मतबाट चुनेर बनाउन पाउदा यहाका जनमानसमा खुसी छाएको थियो भने अब साउदीमा पनि विस्तार-विस्तार आफ्नो अधिकार आफैले सुनिश्चित
गर्न पाउदै जाने र देशको शासन प्रणाली खुल्ला हुँदै जानेमा देशवासीहरु आसामुखी र बिश्वासमा छन् । यस कुरालाई हेर्दा दश बर्ष पहिला र अहिलेमा यहाँको शासकहरुबाट पनि राजनीतिक हिसाबले धेरै खुल्ला र सुधारहरु गर्दै ल्याएको पाईन्छ र खुल्ला रुपमा विचार र बिकास भएको महसुस यहाँका जनतालाई भएको कुरा जनमानसमा बाहिर आउन थालेको छ ।
यो देश एकल मुस्लिम धर्म भएको देश हो, यस देशको मुस्लिम धार्मिक विचारधाराहरु राम्रो नै छन् । यहाँ बस्ने सबै नागरिकहरुले मुस्लिम धर्म मान्दछन् जसमा सुन्नीको बाहुलियता धेरै छ भने सिआको बहुलियता थोरै छ । मुस्लिम धर्म ग्रन्थलाई कुरान भनिन्छ । यहाँका मुस्लिमहरु धर्म प्रति कट्टर छन् । यहाँ सबै मुस्लिमहरुलाई र्इश्वर (अल्ला) को नाममा दिनको ५ पटक सला गर्न भनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुमा अनिवार्य रुपमा राज्यको तर्फबाट निर्देशन गरिएको छ । यस निर्देशनलाई शिरोपर गरेर यहाँका सम्पूर्ण मुस्लिमहरुले दिनमा ५ पटक सला गर्दछन् यसो गरेमा पाप कटेर पुन्य प्राप्त गरिन्छ भन्ने बिश्वास गर्दछन् । जति पनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुमा मुस्लिम धर्म के हो यसलाई कसरि पालना गर्नु पर्छ र कुरान के हो भन्ने कुराको ज्ञान हुन्छ र यसको लागि अनिवार्य रुपमा अलगै स्कुल पाठशालाको व्यावस्था गरिएको छ । मैले माथिनै भनि सके यस धर्ममा धेरै फिर्काहरु भएता पनि सिआ र सुन्नी दुर्इ किसिमका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु आ-आफ्नै तरिकाले अलग-अलग सला पढ्ने गर्दछन् । सला गर्ने मन्दिर (मस्जित्) पनि आ-आफ्नै छन् । सिआ सला पढ्ने मजितमा सुन्नीहरु जादैनन् भने सुन्नीले पढ्ने मजितमा सिआहरु पनि जादैनन् । सिआ र सुन्नीको मगजीतको अनुपादमा सुन्नी मगजीतहरु धेरै मात्रमा निर्माण भएका छन् । यस धर्मको तिर्थस्थल पनि यहीं देशको पश्चिम दक्षिण लाल सागरको नजिक भएको हुनाले यस तिर्थस्थलमा विश्वको मुस्लिमहरु धेरै मात्रमा सालको दुर्इ पटक मक्का र मदिनामा हज्ज गर्न आउने भक्तजनहरुको ठूलो घुर्इचो लाग्दछ । साथै पर्यटकिय हिसावमा पनि मुस्लिम धर्म अनुसार मुस्लिम धर्ममा अन्तिम जन्म अवतार महमद नविको च्यान (होप्रा) हेर्न र नविले सला गरेको या गर्ने गरेको ठाउँ, नविले उमारेको जमजम पानी पिउन साथै नविलाई मारेको ठाउँ, आदम हावा वस्ने स्थानहरुलाई सुरक्षीत रुपमा संरक्षण गरि राखिएको ऐतिहासिक कुराहरुलाई हेर्न विश्वका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु यस साउदी अरबमा आउँछन् । तर यी ठाउँहरुमा गैर मुस्लिमहरु भने प्रवेश र अवलोकन गर्नको लागि निशेध गरिएको छ । र मुस्लिम धर्म अनुसार पृथ्विमा आएका अवतारीहरुलाई हृदय देखि स्मरण गर्दछन् भने बर्षभरी नै हज्ज गर्न यहाँ मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु आइरहन्छन् । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको चाड इद हो यो इद दुर्इ पटक गरेर मान्ने गर्दछन् । जसलाइ इद र बख्री इद भनेर बुझने गर्दछन् । इद आउनु भन्दा पहिला रामादान एक महिना सम्म मान्दछन् यस रामादानको समयमा ३० दिन वर्त (रोजा) बसे पछि ५ दिन सम्म धुमधामका साद इद मान्ने गर्दछन् । यस इदको समयमा आफन्त मान्छेहरुसंग भेटघाट गर्ने देखि लिएर शुभकामना साटा साट गर्ने प्रत्येक घरघरमा बाख्रा, भेडा, गोरु गाई काटेर मनाउने चलन छ । तर ३० दिनको रोजा (वर्त) बस्ता चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्विमा नआए सम्मा पानि सम्म पनि मुखमा लगाउदैनन् याहाँ सम्मकी मुख भित्र आएको थुकलाइ समेत निल्दैनन् । जब चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्विमा आए पछि मात्र खाना पानी खान्छन् । तर यस्ता चाड वाडमा मादक पर्दाथ भने प्रयोमा ल्याउदैनन् मादक पदार्थ पिउनमा यस मुस्लिम धर्ममा निषेध गरिएको छ र त्यो सबै मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले ब्यावहारमा उतारेका पनि छन् । र साउदीको राष्ट्रिय कानूनले पनि निषेध र मादक पदार्थ सेवन गरेको पाएमा कडा दण्ड सजाय गर्ने व्यावस्था गरेको छ ।
साउदी अरबको कानून मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको धर्म दर्शन कुरानको आधारमा आधारित राष्ट्रिय कानूनहरु निर्माण भएका छन् । कुरानको हिसाबमा दण्ड सजाय र माफियाको व्यावस्था गरिएको छ । यस देशमा पनि आफ्नो सफाया पेश गर्ने पुरा हक दिईएको छ । विभिन्न किसिमको कानूनी उपचारको लागि फर्महरु, वकिल र अदालतहरु छन् । लेवरकोट अमिरकोट जवज हाकामा आदि-आदि व्यावस्था गरि राखिएका छन् । यस देशमा जिउ ज्यान र धन मालको सुरक्षा पूर्ण रुपमा सरकारले गरेको छ । यस देशको कानूनमा रगतको बदला रगत सिद्घान्तमा आधारित भएकोले ज्यानमारमलाई सजाय दिदा सार्वजनिक स्थलमा लगि, यहाका धर्मगुरु इस्लाम मुतवाहरुले कुरान वाचन गरी उनिहरुको आदेशमा धारिलो हतियारले घाँटी छिनालेर दण्ड सजाय दिने कानून छ । यहाँको कानूनमा वर्ग, जाती, धनि, गरिब, ठूलो, सानो एवं राज खान्दान जुनसुकै व्याक्तिलाई पनि सजाय दिंदा समान रुपमा दिन्छ ।
यस साउदी अरबका मानिसहरुले लगाउने पोशाकहरु देख्नमा छोरा मान्छे र छोरी मान्छेको एउटै किसिमको आकारप्रकारको देखिन्छ । तर एउटै किसिमको आकारप्रकारको देखिए पनि रंङ्गमा भने फरक छ । छोरा मान्छेले प्राय सेतो रङ्गको लगाउछन् । छोरी मान्छेले भित्र जेसुकै लगाए पनि बाहिरबाट अनिवार्य कालो रङ्गको कपडा लगाउनु पर्छ र लगाएका हुन्छन् । छोरा मान्छेले लगाउने राष्ट्रिय पोशाक सेतो रङ्गबाट तयार गरिएको पोशाकलाई तोफ र टाउकोमा लगाउनेलाई गोत्रा भनिन्छ भने टाउकोमा लगाउने डोरी जस्तो बनेकोलाई गल तगिया भन्दछन् र खुट्टामा भने जुत्ता चप्पल दुबै खाले लगाउदछन् । छोरी मान्छेले लगाउने कालो कपडाबाट बनेको पोशाकलाई बुर्का भन्दछन् छोरी मान्छेको यो कालो बुर्काले शरिरको सबै अङ्गहरु पुरै रुपमा ढाकेको हुन्छ । घरबाट बाहिर निस्कनु पर्दा यो कालो बुर्का अनिवार्य लगाउनु पर्दछ । किनभने मुस्लिम धर्ममा छोरी मान्छेले अनुहार देखाउन र छोरी मान्छेको अनुहार हेर्न निषेध गरिएको छ । कालो बुर्का नलगाई बाहिर निक्लेको खण्डमा यहाँका धर्मगुरु, मुतवा एवं प्रशासनले गिरफतार गरी सजाय दिन्छ भने समाजबाट पनि यसलाई कडा गरिएको छ । यस देशको मानिसहरुको प्राचीन खाना खजुर (तमोर) खरबुजा (हापहाप) र उँटको दुध साथमा खबुज भए पनि बिकासको गतिसगै मानिसको चाहाना अनुरुप भात, साथै विभिन्न किसिमका आधुनिक प्रकारका भोजनहरु र्इच्छा अनुसार खाने गर्दछन् तर पनि खजुर र खरबुजा भने अहिले पनि त्यतिकै लोकप्रिय छन् ।
यो देशको प्राचीन आर्थिक श्रोत भेडा, बाख्रा, उँट पालनबाट भएपनि आज आएर गहुँ मकै साथमा विभिन्न किसिमका वैज्ञानिक प्राविधिकबाट विभिन्न किसिमका साग सब्जि फल फुल पनि आय आर्जन गरेका छन् । साथै वैज्ञानिक उपजको विकासको क्रममा यस देशको मुख्य आय श्रोत तत्वहरु प्रमख रुपमा पेट्रोल, डिजेल, साथै सुन, चादि, इण्डष्ट्रियलहरुबाट देशको विकास राम्रोसंग भएको छ । यस देशको विकासको वखान गर्दा एउटा काव्य नै बन्ने भएकोले यस देशमा विकास क्रमको कुनै कसुर नरहेको जानकारीका गराउदै पेट्रोलियम पदार्थ र इण्डष्ट्रियलमा विश्वको धनी राष्ट्रहरुमा साउदी अरबको नाम आउँछ । यस देशको शहर बजार, रोड, पुल, कलकार्खाना कम्पनी जनजीवन व्याक्तिगत सम्पतिहरुलाई हेर्दा यो देश विकासको क्रममा चरम चुलीमा पुग्न धेरै छैन । यस देशको आर्थिक स्थिति यस कुराबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छकी यस साउदी अरबमा संसार राष्ट्रका मानिसहरु कार्यारत कर्मचारीको रुपमा पाइन्छन् । अर्को तर्फहेर्दा बाटो घाटो सबै पक्की गरिसकिएको छ भने घरहरु सबै पक्की र ८५ (पचासी) तला सम्मका अग्ला घर विल्डीङ्गहरु छन् ।
Posted by limbu at 10:40 PM